लसुनको माखनमा स्याउको साथ कुखुरा | बेजिया
भुनी कुखुरा को मन पर्दैन? त्यहाँ सायद कोही कोही होला, तर यो ती व्यंजनहरू मध्ये एक हो जसको साथ तपाईं यसलाई लगभग सही पाउनु हुन्छ। त्यसकारण हामी तपाईंलाई बिजियामा प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं बिभिन्न विधिहरू यो लसुन बटर एप्पल भुनी चिकन जस्तै।
यो कुखुराको बारेमा के खास छ? सुरूवात गर्नका लागि हामीले जैतूनको तेलको सट्टामा माखनको लागि प्रतिस्थापित गरेका छौं र हामीले यसलाई लसुनको स्वाद दिएका छौं ताकि कुखुराको मासुको स्वाद एकदम हुन्छ। थप रूपमा, हामीले यस रूपमा समावेश गरेका छौं गार्निश आलु र स्याउ, कि यो एक धेरै विशेष मीठो स्पर्श दिनुहोस्।
स्याउ संग यो भुनी चिकन बनाउने एक हावा हो। तपाईंले भर्खर नुस्खा पछ्याउनुपर्नेछ र खाना पकाउन केहि बढी मिनेटहरू थप्नुहोस् यदि तपाईंले देख्नुभयो कि कुखुरा पूरा भएको छैन। त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् कि यसले प्रभाव पार्छ कि यो चाँडै वा पछि भयो, जस्तै कुखुराको प्रकार, यसको आकार र तपाईंको भट्टीको सञ्चालनको रूपमा। एक पटक प्रयास गर!
१ पूरै कुखुरा, सफा र सुक्खा
रोमेरीका4स्प्रिगहरू
२ बटर चम्चा
मौसम कुखुरा बाहिर र भित्र।
पछि रोजमेरीका दुई स्प्रिगहरू घुसाउनुहोस् र आधा कागती भित्र र टुथपिक्सको साथ बन्द।
माखन र लसुनको लौंगलाई स्किललेटमा राख्नुहोस् र माखन पग्लिए सम्म तताउनुहोस्।
बटर मिश्रणको साथ स्मीयर र कुखुराको लसुन र यसलाई बेकिंग डिशमा राख्नुहोस्।
मध्यम उचाइमा बेक गर्नुहोस् र १ minutes मिनेटसम्म पकाउनुहोस्।
छीलो गर्दा र आलू र स्याउलाई वेजमा काट्नुहोस्।
एक चौथाई घण्टा पछि, ओभन खोल्नुहोस् र रस संग कुखुरा छर्कने कि तपाईंले जारी गर्नुभयो। त्यसपछि, चुली बन्द गर्नु अघि, आलुहरू थप्नुहोस्।
आधा घण्टा बढी पकाउनुहोस्, १ juice मिनेट पछि यसको आफ्नै रस र लसुनको साथ कुखुरामा पानी हाल्नुहोस्।
आधा घण्टा पछि, स्याउ समावेश गर्नुहोस् र फेरि रस संग पानी। २० मिनेट वा कुखुरा नभएसम्म पकाउनुहोस्। पछिल्लो केहि मिनेटमा तातोलाई अप गर्नुहोस् यदि तपाईं यसलाई अधिक पोष्ट्न चाहनुहुन्छ भने।
ओभनबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, ताजा रोजमेरीको केही स्प्रिगहरू थप गर्नुहोस् र सेवा गर्नु अघि minutes मिनेट खडा गरौं यो बटर एप्पल भुनी चिकन लसुन हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » CARNES » लसुनको बटरमा एप्पल भुनी चिकन
कसरी तपाईंको हातहरूले तपाईंको उमेर प्रकट गर्दैन